Izintaba zeGiant eMayini ye-Elbe
Izintaba zeGiant (iRiesengebirge ngesiJalimane, iKarkonosze ngesiPolish) ziyinkimbinkimbi yokuma komhlaba nezindawo eziphakeme kakhulu ezintabeni eCzech Republic naseCzech Highlands. Itholakala enyakatho-mpumalanga yeBohemia (ingxenye esentshonalanga ilele esifundeni saseLeberec, ingxenye esempumalanga esifundeni saseHradec Králové) naseningizimu yengxenye yePoland yeSilesia (Lower Silesian Voivodehip). Intaba ephakeme kunazo zonke eziNtabeni zaseKrkonoše nakuyo yonke iCzech Republic yiSkyěžka (1603 imitha). Ngokwenganekwane, isipoki esinganekwane saseKrakonoš siqapha izintaba. Izintaba zeGiant ziphakathi kwezindawo ezithandwa kakhulu zezintaba eCzech Republic.
Amathegi: Mountains Elbe Valley
Indawo: ILabský důl, 543 51 Špindlerův Mlýn, Czech Republic